Izindaba - Uyazi ukuthuthukiswa kwefoni ephathekayo? Kwaziguqula ngempela izimpilo zethu
Uyazi ukuthuthukiswa komakhalekhukhwini? Kwaziguqula ngempela izimpilo zethu
Ekhuluma ngalo mkhiqizo, abanye abantu kufanele ukuthi bawubonile. Eqinisweni, uma kukhulunywa ngokuqinile, lo mkhiqizo awunakubizwa ngokuthi iselula. Le mishini yavela okokuqala ngekhulu lama-20, lapho iShanghai kwakuyidolobha lokuqala ukuvula iziteshi zokukhokha. Ngemuva kwalokho, imishini ye-BP yangena ngokusemthethweni emakethe yaseChina. Ngokuphathelene nokusebenza kwale divayisi, abanye besizukulwane sangemva kweminyaka yama-80s abayisebenzisile bangazi ukuthi uma ufuna abangani bakho noma amakhasimende ukuthi baxhumane nawe, kufanele ubatshele inombolo yakho yoku-paging kusengaphambili. Lapho-ke lapho bedinga ukuxhumana nawe, bazothola isiteshi se-paging futhi bazise le nkundla yenombolo yakho. Ekugcineni, ipulatifomu izokwazisa, ngakho-ke uyawuthola Thola umyalezo obiziwe ukuze uthole idokodo lefoni eliseduze ozokushayela. Ngokubheka le nqubo, singazi ukuthi ukuxhumana kuleyo nkathi kwakungelula kakhulu, futhi kwakungeke kuzuze imisebenzi efike ngesikhathi.
Ukukhuluma ngaleli fomu likamakhalekhukhwini, lisondele kancane empilweni yethu yesimanje. Lo mkhiqizo wakhiqizwa yi-Motorola ngo-1973. Ukuvela kwamaselula kubonisa ukuthi abantu banamaselula ngempela. Kulo mkhiqizo, kunesikrini se-LCD nesethi yezinkinobho. Ngokubona kwethu, mhlawumbe lo mkhiqizo ungenza izingcingo kuphela. Eqinisweni, inemisebenzi eminingi, njengokudlala imidlalo, ukurekhoda ne-MP3.
Lo mshini uqale ukuvela emazweni angaphandle, ngokushintshana komhlaba, izwe lethu nalo laqala ukwethula lo mkhiqizo. Ngo-1987, uGuangdong wahola ekuqedeni ukuxhumana. Ngemuva kokuvela kwalo mkhiqizo ezwenikazi, ubuthandwa kakhulu ngabantu. Kodwa-ke, ngenxa yenani eliphezulu ngaleso sikhathi, abantu babecabanga ukuthi uma kukhona umuntu onomshini onjalo, kungaba ngundlovukayiphikiswa wasendaweni ngombono wethu wamanje. Kamuva, ngokuhamba kwesikhathi, imikhiqizo emisha yaqala ukuvela. Ngo-2001, umakhalekhukhwini wasuswa yizikhathi, okwaba yigama lomlando ngempela.
Ukuza kwe-2G umakhalekhukhwini i-Era
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe, imikhiqizo emisha yocingo lweselula ivele empilweni yethu. Yize umakhalekhukhwini owedlule ubaluleke kakhulu kumaselula, ivolumu yawo inkulu kakhulu futhi akulula ukuyiphatha. Ngakho-ke, abantu bakhulise omakhalekhukhwini abancane nabalula. Ngaphezu kwalokho, ngobuchwepheshe bezokuxhumana, abantu benze ubuchwepheshe be-2G. Lolu hlobo lomakhalekhukhwini olungaxhuma kwinethiwekhi ye-2G lungangeza eminye imisebenzi eyayikade ingekho ngokusebenzisa le nethiwekhi, njengokukwazi ukuthumela i-imeyili nesoftware kwabanye. Kulolu hlobo lomakhalekhukhwini, kukhona nemikhiqizo ethile edumile, njengeNokia, okusinika umuzwa ojulile. Yayithandwa kakhulu ngaleso sikhathi, ngoba ikhwalithi kamakhalekhukhwini wayo yayiyinhle kangangoba noma ingawa phansi, ibisengahlala kahle.
Ake sikhulume ngesitayela sokubukeka kwalolu hlobo lweselula. Ngokuya ngokubukeka, kunezinhlobo eziningi zemiklamo. Isibonelo, kukhona ama-push-pull, futhi kunezinhlobo eziningi zazo, njenge-flip-flop, flip-flop, nezitayela zesikrini ezinkulu manje, ezahlukahlukene abantu abangakhetha kuzo.
Ukuhlakanipha namandla kuyeza
Ngenqubekela phambili eqhubekayo yobuchwepheshe bethu, ngaphambi kokuba abantu benze inethiwekhi ye-2G ayisakwazi ukuhlangabezana nezidingo zabantu,. Ngenxa yalokho, sekuvele amanethiwekhi wokuxhumana we-3G ne-4G. Futhi ngokuvela kwala manethiwekhi, abantu baklanyelwe omakhalekhukhwini abanemisebenzi ehambisanayo. Yilokho esikusebenzisayo njengamanje. Lolu hlobo lweselula lunezinhlelo eziningi, njengokulalela izingoma nokubuka amavidiyo.